युनाइटेड इदी–मर्दीको आईपीओ प्रि –अलोटमेण्ट सम्पन्न, आइतवार बाँडफाँटको सम्भावना
मंसिर १२, काठमाडौं । युनाइटेड इदी–मर्दी एण्ड आरवि हाईड्रोपावर लिमिटेडको आईपीओ प्रि –अलोटमेण्ट शुक्रवार सम्पन्न भएको छ । विक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटलले शुक्रवार प्रि –अलोटमेण्ट सम्पन्न भएको जानकारी दिएको हो ।
प्रि –अलोटमेण्ट भएको तीन दिनभित्र आईपीओ बाँडफाँट गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । सम्भवतः आइतवारभित्र बाँडफाँट गरिने विक्री प्रबन्धकले जानकारी दिएको छ ।
उक्त कम्पनीको आईपीओमा मागभन्दा १२ गुणा बढी आवेदन परेको छ । उक्त कम्पनीले मंसिर ३ गतेदेखि ७ गतेसम्म सार्वजनिक निष्कासन मार्फत सर्वसाधारणका लागि ८ लाख १२ हजार ७३६ कित्ता शेयर विक्री खुला गरेको हो । कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थायिनका लागि पहिलो चरणमा आईपीओ विक्री गरि दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणका लागि विक्री गरेको हो ।
स्थानियमा वितरण हुन नसकेको २ लाख ४३ हजार ९१० कित्ता शेयरसमेत जोडर सर्वसाधारणका लागि कुल ८ लाख ७३ हजार ९१० कित्ता शेयर वितरण गर्न लागेको हो । कुल कित्तामध्ये कम्पनीले ४३ हजार ६९६ कित्ता सामुहिक लगानी कोषका लागि बाँडफाँट गरेको छ भने १७ हजार ४७८ कित्ता कम्पनीको कर्मचारीहरुका लागि छुट्याएको छ ।
उक्त कम्पनीले कास्की जिल्लामा ७ मेगावाट क्षमताको अपर मर्दीखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी विसं २०७६ साल असोज २० गतेदेखि विद्युत् उत्पादन गर्दै आएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६/ ७७ सम्म कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. ८५ दशमलव ८२ रहेको छ ।
हाल रू. ३१ करोड ५० लाख चुक्तापूँजी रहेको उक्त कम्पनीको आईपीओ विक्रीपश्चात यो पूँजी रू. ४२ करोड पुग्नेछ । कम्पनीको शेयर स्वामित्व संस्थापकतर्फ ७५ प्रतिशत र सर्वसाधारणतर्फ स्थानियमा १० र अन्य सर्वसाधारणमा १५ प्रतिशत गरी २५ प्रतिशत रहेको छ ।